I-EN standard Dewar Flask, China EN standard Dewar Flask Manufacturers, abaxhasi, iFektri -Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>iimveliso>Isilinda se Cryogenic
Uxinzelelo Ukusebenza: 1.38Mpa, 2.02Mpa, 2.3Mpa, 2.4Mpa, 2.84Mpa njl
SinoCleansky I-EN standard Dewar Flask inomgangatho ophezulu wokucoca ubuchwephesha obuninzi bokufaka i-thermal-insulating technology, eqinisekisa ukusebenza okuphezulu kwe-thermal, ixesha elandisiweyo lokubamba, iindleko eziphantsi zomjikelezo wobomi kunye nobunzima obuphantsi bokunciphisa iindleko zokusebenza kunye nokufaka.
Ngeli xesha, sidlulile isiqinisekiso se-CE. Esi siqinisekiso sisetyenziswa jikelele kwimarike yaseYurophu.
I-EN standard Dewar Flask ingasetyenziselwa i-oksijini engamanzi, i-argon edibeneyo, i-nitrogen ene-liquefied, i-carbon dioxide ene-liquefied njalonjalo, egubungela iindawo ezinje ngezonyango, ukutya, ukuwelda nokusika njl.
Iisilinda zihanjiswa kunye nengxelo yovavanyo olunenkcukacha. Ingxelo yeSinoCleansky Factory ibonisa zonke iimvavanyo ezifunwa yi-GB24159 std, ezibandakanya: uvavanyo lweekhemikhali, ukuhlolwa kwe-radiographic, njl njl.
Kwiintlobo ezithandwayo ezinje nge-DPL450-175L / 195L / 210L i-dewar flasks, zihlala zithunyelwa nge-20ft container, ubungakanani bokulayisha bujikeleze i-40 ukuya kwi-50pcs
Uyintoni umahluko phakathi kwemigangatho eyahlukeneyo yemveliso?
Umgangatho we-GB wamkelwa ikakhulu ngabathengi abavela kuMbindi Mpuma, kuMazantsi mpuma eAsia, eMzantsi Asia, eRashiya, eUkraine, njl.njl.
Le mveliso kunye namalungu ngokomhla we-invoyisi wokuthenga unokuyonwabela iinyanga ezili-12 (iingxaki zokucoca iinyanga ezingama-36) inkonzo yewaranti.